သီးသန့်မူဝါဒ | မင်္ဂလာပါ
ပင်မစာမျက်နှာ 1 > ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ 2
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည် mysteryanime.com (“ ဆိုက်”) မှသင် ၀ ယ်ယူသောအခါသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူသောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်း၊ အသုံးပြုကြောင်းနှင့်မျှဝေပုံကိုဖော်ပြသည်။
ယုံကြည်မှုသည် Shopify ပလက်ဖောင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးသင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်မှုပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအဓိကတန်ဖိုးသုံးရပ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြသည်။ ဤတန်ဖိုးများကသင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် privacy ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်သာကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်တော့သောအခါဤအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်အမည်ဝှက်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး၊ ဤလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်နိယာမမှာသင်၏သတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏အကျိုးအတွက်သာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
အကယ်၍ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံပါကကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုချက်မပေးလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်လိုအပ်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမျှဝေရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရားဝင်မျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်တားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။
ကုန်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်
Shopify ကိုအသုံးပြုသောကုန်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအဖွဲ့၏အကျိုးကျေးဇူးမရှိပါ။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့ကိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အကြောင်းအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အမေးအဖြေများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် whitepapers များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသော privacy နှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုလည်းတုံ့ပြန်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ (ဥပမာအားဖြင့်၊ Shopify ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ပေးသွင်းသူငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ရန်) သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေသူတစ် ဦး ဦး သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (ဥပမာအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးရန်) ။ ဥရောပဥပဒေကဤအကြောင်းပြချက်များကို“ တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွား” ဟုခေါ်သည်။ ဤ "တရားဝင်အကျိုးစီးပွား" တို့ပါဝင်သည်:
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပွင့်လင်းမြင်သာမှုပေးခြင်း၊ သင့်လျော်သည့်နေရာတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောသူ၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်မျှကြာအောင်သိမ်းထားမည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောနည်းပညာဆိုင်ရာအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။
Shopify ကိုအသုံးပြုသောကုန်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာ“စက်သင်ယူမှုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် (ဥရောပဥပဒေကယင်းကို "အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း" ဟုရည်ညွှန်းသည်) ကျွန်ုပ်တို့စက်သင်ယူမှုကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင် (၁) လုပ်ငန်းစဉ်၌လူသားတစ် ဦး ပါ ၀ င်နေဆဲ (ထို့ကြောင့်အလိုအလျောက်မရသေးသော)၊ သို့မဟုတ် (1) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများမရှိသည့်နည်းများဖြင့်စက်လေ့လာခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။
သင်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်ပါစေသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်အနေဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ သင် Shopify အသုံးပြုပုံပေါ် မူတည်၍ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအသုံးပြုခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း) ကို ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းခံရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖျက်ရန်၊ ဖျက်ရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုသင်ကျင့်သုံးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပိုမိုတောင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလည်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် Shopify-powered store မှတစ်ခုခုဝယ်ယူပြီးသင်၏ဝယ်ယူမှုနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးလိုပါကသင်နှင့်သင်ဆက်သွယ်ထားသောကုန်သည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုပရိုဆက်ဆာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးသူတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုကို၎င်းတို့အားတုန့်ပြန်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ကုန်သည်များအနေဖြင့်ဤတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့အားကိရိယာများပေးခြင်းနှင့်သူတို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ကူညီလိမ့်မည်။
သင့်အတွက်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးရန်အတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုသတ်မှတ်လိုပါကသင့်အတွက်ဖိုင်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာမှကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ။ အခြားအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါကသင်တောင်းဆိုမှုသည်သင့်ထံမှလာခြင်းနှင့်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ သင်၏အီးမေးလ်တွင်သင်၏ခွင့်ပြုထားသောကိုယ်စားလှယ်၏အမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာကိုထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ “ မခြေရာမကြနှင့်” signal သည်ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထို signal ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကနေဒါကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်၏ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ပြင်ပရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပေးပို့နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည့်နိုင်ငံများ၏ဥပဒေများအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုနယ်နိမိတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းပြီးခိုင်မာသောအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများရှိသောနိုင်ငံများသို့သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသာပို့ရန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပို့မည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
သင်သည်ဥရောပသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ယာလန်လက်အောက်ခံ၊ Shopify International Ltd. မှထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြား Shopify တည်နေရာများနှင့်ကနေဒါအပါအ ၀ င်အခြားဒေသများတွင်တည်ရှိနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူများထံသို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့သည် (ကျွန်ုပ်တို့အခြေပြုရာ) ) နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဥရောပပြင်ပသို့ပေးပို့သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်သည်။
သင်သည်သင်၏ဥရောပသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိလျှင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကနေဒါသို့ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောအခါ၎င်းသည်ကနေဒါဥပဒေအရကာကွယ်ထားသည်။ ဥရောပကော်မရှင်မှတွေ့ရှိသောသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံလောက်စွာကာကွယ်လိမ့်မည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအမေရိကန်သို့တိုက်ရိုက်ပို့သောအခါ၊ EU-US Privacy Shield နှင့် Swiss-US Privacy Shield အစီအစဉ်များအကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်တည်ရှိပါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စီမံသည်နှင့် ပတ်သက်၍ စံနှုန်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ဤပရိုဂရမ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Privacy Shield ၏သတိပေးချက်၊ ရွေးချယ်မှု၊ ရှေ့သို့လွှဲပြောင်းမှုများအတွက်တာ ၀ န်ယူမှု၊ လုံခြုံရေး၊ အချက်အလက်သမာဓိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အကန့်အသတ်၊ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ဤအစီအစဉ်နှစ်ခုတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်အာဏာသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခံရနိုင်သည်။
သင်သည်ဥရောပသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်တွင်တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့က Privacy Shield Principles ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟုယုံကြည်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်နိုင်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကသင်လည်းလုပ်နိုင်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးစင်တာကိုဆက်သွယ်ပါ, အမေရိကန်အနုညာတစီရင်အသင်း (ICDR / AAA) ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ။ ICDR / AAA သည်သင့်အားအခမဲ့အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ပေးသည်။ သင်သည် ICDR / AAA သို့ဆက်သွယ်ပြီးနောက်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဟုသင်ခံစားရလျှင်သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုဖြေရှင်းရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ binding ခုံသမာဓိ.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေစဉ်၊ အချို့သောသူများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို (ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောတရားရုံးအမိန့်ကိုရရှိပါက) ထုတ်ဖော်ရန်တရားဝင်တောင်းဆိုခံရနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များသည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၏လုံခြုံမှုနှင့်သမာဓိရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်များကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်သိုလှောင်မှုနှင့်ဘဏ္financialာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သောစနစ်များ၏လုံခြုံရေးကိုအကဲဖြတ်သည်။ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်လွှင့်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်း ၁၀၀% သည်လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်ပတ်သတ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.shopify.com/security.
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ cookies” နှင့်အခြားခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်
ကျနော်တို့ကိုသုံးပါ cookies တွေကို နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည့်အခါအလားတူခြေရာခံခြင်းနည်းပညာများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဤနည်းပညာများအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များတွင် cookies များကိုတင်သောအခြားကုမ္ပဏီများစာရင်း၊ ကုန်သည်တစ် ဦး ၏စတိုးဆိုင်၌ကျွန်ုပ်တို့သုံးသော cookies များစာရင်းနှင့်အချို့သောအမျိုးအစားများမှသင်မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အပါအဝင် ကွတ်ကီးများ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ငါတို့ကြည့်ပါ cookie ပေါ်လစီ.
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုတိုင်တန်းလိုပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ [အီးမေးလျ protected]သို့မဟုတ်အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများတွင်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုရန်တရားဝင်စည်းကမ်းချက်များကိုတောင်းဆိုလိုလျှင် (ဥပမာအားဖြင့်ဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်တရားရုံးအမိန့်ရှိလျှင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ.
Shopify Inc က
ATTN: ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် privacy ကို
K2P 1L4 ON Ottawa
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အမေရိကသို့မဟုတ်အာဖရိက၌တည်ရှိပါက:
Intertrust အိုင်ယာလန် o / c
ဒုတိယထပ် 2-1 ဗစ်တိုးရီးယားအဆောက်အ ဦး
အကယ်၍ သင်သည်အာရှ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တွင်တည်ရှိပါက -
Shopify ကုန်သွယ်ရေးစင်ကာပူ PTE ။ LTD ။
# 13-00 ရော်ဘင်ဆင် 77,
သင်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအလိုအလျှောက်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာ, အိုင်ပီလိပ်စာ, အချိန်ဇုန်, သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသော cookies အချို့နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင် သင့်ရဲ့ device အကြောင်းကိုအချက်အလက် စုဆောင်းပါသည် ။ သင်ဆိုက်ကို browser ဖြင့် သုံးစဉ် ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုရောက်ရန်သင့်အားရည်ညွှန်းသောအရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများ သင်ကြည့်ရှုသောတစ်ခုချင်းစီ web စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းပါသည်။ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဤအလိုအလျောက်-ကောက်ခံသတင်းအချက်အလက်များကို "စက်ပစ္စည်း အချက်အလက်" ဟုရည်ညွန်းပါသည်။
- [သုံးစွဲခဲ့တဲ့ Track အခြားနည်းပညာအမျိုးအစား [INSERT ဖော်ပြချက်]]
သင်တစ်ဦးဝယ်ယူစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုဒ်မှတဆင့်ဝယ်ယူစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါထို့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏အမည်, ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, ရေကြောင်းလိပ်စာအပါအဝင်သင့်ထံမှအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း, (ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်တွေအပါအဝင်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက် [ လက်ခံခဲ့သည်အခြားမည်သည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံများ INSERT] ), အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို။ ကြှနျုပျတို့သညျ "အမိန့်ပြန်ကြားရေး" အဖြစ်ဤအချက်အလက်ကိုးကားပါ။
[: လိုင်းပိတ်သုံးစွဲမှုအချက်အလက်ကို, ဝယ်ယူပြီးဖြစ်၏ Market data / list] [ဖမ်းယူအခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ INSERT]
- ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ‌ေငွေပေး‌ေချေရာတွင် လိမ်လည်မှုကို စစ်ဆေးရန်
သင်‌မျှ‌ဝေထား‌သောသင်၏အကြိုက်အတိုင်း ၊ ငါတို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဥ်သော သတင်း စသည်တို့တွင်လည်း သုံးပါသည်။
- [ ORDER သတင်းအချက်အလက်များ၏အခြားသောအသုံးပြုမှု INSERT]
[: ကြော်ငြာခြင်း / RETARGETING] [INSERT အခြားသတင်းများအပါအဝင် DEVICE ကိုသတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်း]
ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ , သင်၏ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို တတိယပါတီများနှင့် မျှဝေသုံးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်,ကျွန်ုပ်တို့ Shopify ကိုသုံး၍ ဤ၀က်ဆိုဒ် ကိုဖန်တီးထားသည်။ - Shopifyက သင်၏အချက်အလက်ကို ဘယ်လို သုံတယ်ဆိုတာကို https://www.shopify.com/legal/privacy မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ Google Analytics ကိုသုံး ၍ ‌ေဖောက်သည်‌တွေ အ‌ကြောင်းကို ‌လေ့လာပါသည်။Google Analytics ကသင်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ ဘယ် လိုသုံးတယ်ဆိုတာကို https://www.google.com/intl/en/policies/privacy မှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Google Analytics နှင့် အဆက်အစပ် မလုပ် လိုလျှင် https://tools.google.com/dlpage/gaoptout: ကို လုပ်နိုင်ပါသည်။
- [ SERVICES အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းကိုမဆို FROM မှ Opt-Out Links များပါဝင်သည်]
[အသက်ကန့်သတ် REQUIRED ပါလျှင်  INSERT]
အဆိုပါဆိုက်ကို [[INSERT အသက် AGE]] နှစ်အောက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်မေးခွန်းများကိုရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်တိုင်ကြားချက်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်မှာက e-mail ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါလျှင် [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးအပ်အသေးစိတ်သုံးပြီးမေးလ်များက: